कांग्रेस, राप्रपा र राजशक्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले गर्दा नेकपा आयो, नेकपाले भूलमाथि भूल गर्दै गएकाले अव नेपाली कांग्रेस, राप्रपाको पालो आउनेमा शंका छैन, किनभने जनताका सामु तेश्रो विकल्प देखिदैन । नेकपाले लोकतन्त्रको मुहारमा दल्नुसम्म कालोमोसो दलिसकेको छ । लोकतन्त्र बचाउने हो भने लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको मुद्दा आगामी निर्वाचनका लागि अहं मुद्दा बन्नसक्छ, राजनीतिक चेत छ भने ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र राप्रपाका कमल थापा
मुद्दाभन्दा अन्यत्रै लुतो कन्याएर समय खर्चिरहेका देखिन्छन् ।
कांग्रेस र राप्रपाका सभापतिले विधेयक फिर्ता लेउ भनेर आँखा चिम्लेर झुलिरहेका छन्, विपक्षीको धर्म र कर्म यत्ति हो त ?
कांग्रेसभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता युवा छन्, ती बोल्न त बोल्छन्, आगो बोल्छन्, राष्ट्रिय मुद्दाहरु बोल्छन्, जनताका आशा, अपेक्षा र जनबोली बोल्छन् तर कांग्रेसभित्र बोल्दैनन् ।
राप्रपाभित्र राजेन्द्र लिंगदेनजस्ता युवा छन्, बोल्छन् । स्वयम् अध्यक्ष कमल थापा पनि बोल्छन् तर आगो बोले पनि परिणाममा केही पनि निस्कदैन, किनभने जागरण अभियान भनेर राप्रपा देशभरि हिडिरहेको छ ।
जनताको साथ पनि छ, त्यो साथलाई जनविद्रोह गर्छु भनेर कुर्लनेर जनविद्रोह गर्दै नगरेर राप्रपा आन्दोलन गर्नै नसक्ने मगन्ते बनेको छ । ओलीसँग अहिले पनि राप्रपा हिन्दुराष्ट्र मागिरहेको देखिन्छ । जसले ढुंगा हानेर फाल्यो, उसले माँग्नेलाई तातोभात देला त ? राप्रपाले कहिले बुझ्ने यो यथार्थलाई ?
यसकारण राप्रपाले लोकतान्त्रिक राजतन्त्रसहितको पद्धतिका लागि नेपाली कांग्रेससँग समझदारी गरेर आन्दोलन गर्ने हो भने नेकपाको दम्भयुक्त फुर्ति झार्न सक्ने देखिन्छ । सकिन्छ भने त संविधान बाहिरका बिप्लव र बैद्यलाई समेत एउटा सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्न सक्ने हो भने नेकपाको दुई तिहाइको फुइँकी धेरै लामो समय नटिक्न पनि सक्छ, किनकि आमजनसाधारण जसले नेकपामा देशभक्ति देखेको थिए, तिनको विश्वास हटिसकेको छ ।
जब जनता स्वयम् सडकमा निस्किएका छन्, यस्तो अवसरलाई कांग्रेस र राप्रपाले किन भजाउन नसकेका हुन्, निरंकूशताविरुद्ध बिद्रोह गर्न कुन भद्रो हेरिरहेका हुन्, पर्यवेक्षक जिल्ल छन् ।